Iintlanzi, i-pigmented kunye ne "hepatic" spots ebusweni ziyizona zihloko ngokukhethekileyo phakathi kwentwasahlobo kunye neveki yehlobo. Umnini ngamnye weendawo ezinjalo uqala ukuhlamba ulusu kunye nayo yonke into enokucinga kwaye engenakwenzeka, ukuba kuphela ukufezekisa okungenani umphumo othile. Kodwa oku akunjalo ngokuchanekileyo. Ngaphambi kokuba ukhenkce isikhumba, kufuneka wenze uviwo olupheleleyo lomzimba. Akukho mfihlo ukuba imeko yesikhumba ihambelana ngqo nomsebenzi wezitho zangaphakathi. Ukuba naliphi na iqela eligulayo, liya kuphazamisa kwangoko isikhumba. Ngako oko, okokuqala kuyimfuneko ukufumana isizathu, kwaye ke kuphela iindlela ezahlukahlukeneyo zokukuphelisa, apho indawo ekhethekileyo ihlala ngabantu abasebenzisa indlela yokucoca ulusu lobuso.
Nangona kunjalo, ukuba sithetha ngeentsimbi, oko kukubakho okusemgangathweni kulo mba kuya kuba yinto yokuqala yokuthintela. Amasango amakhulu omkhonto, izibuko zelanga zizona zoncedo abancedisayo, zifihle ubuso ebusweni. Ngexesha leprophylaxis, kunceda kakhulu ukuthatha i-nicotinic ne-ascorbic acid, usebenzise itiye kunye ne-currants kunye ne-rosehips, kwaye nidle imifuno kunye neziqhamo ezinokuthi i-vitamin C. Kungcono ukusebenzisa i-cream ye-cream ye-cream ngaphambi kwe-Matshi-Epreli. Ziziphi izinto ezifakiwe kwi-khilimu ukunceda ukucoca ulusu?
Hydroquinone. Le nkunkuma iphumelela kakhulu ukucoca ulusu, kodwa kunye nayo inetyhefu. I-Freckles ayibonakali ngenxa yokunciphisa iiseli ezivelisa i-melanin. I-Hydroquinone kufuneka isetyenziswe ngokumodareyitha, kuba ukugqithisela kwesikhumba kunokubakho mnyama. Ixabiso litshintshiweyo kubafazi abakhulelweyo kunye nabasetyhini ngexesha lokutya.
Arbutin. Le nkunkuma inefuthe elingaphantsi kwe-hydroquinone, kodwa inezinga eliphantsi lotywala. I-Arbutin inqanda umsebenzi weeseli ezifaka isandla kwimveliso ye-melanin.
Kojic acid. Le nto isetyenziswa rhoqo kwiikramshi zokuzicoca. Impembelelo yokumhlophe iyinto encinci, kodwa i-kojic acid yinto efanelekileyo ye-antioxidant ne-exfoliating agent.
Ascorbic acid. Kwiipropati zayo, loo nto ifana kakhulu neyejic acid, kuphela i-ascorbic acid ingakhokelela ukuvuvukala kunye nentlungu.
Alpha hydroxy acids. Le nkunkuma yinto efanelekileyo yokufaka i-agent agent. I-Alpha hydroxy acids isetyenziselwa ukuluhlu lwekristatin.
Iimveliso ezinonopheliso ezinomtsalane - iisethi zeenkqubo eziququzelelwe ukutshatyalaliswa kwegazi, ukukhupha i-bleaching, ukususwa kweenkqubo ezivuthayo, kunye nokukhuselwa kwimisebe yelanga.
Ukongeza kwi-cosmetology yendabuko, imveliso yonyango inokubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokukhupha isikhumba somzimba. Iimali zabantu abanjalo zinokulungiswa yilowo nalowo ofuna ekhaya. I-cosmetology yabantu bacebisa ukuba i-bleaching yolusu isebenzise ezi zityalo kunye nezityalo:
Bearberry. Ngokwakheko, esi sityalo sinomlinganiselo omncinci we-acid acids kunye ne-hydroquinone.
Licorice. Iqule kwiinkalo ezincinane ze-phenolic kunye ne-acid acids, ecacisa ngokucacileyo ulusu.
Yarrow. I-flavonoids equlethwe kwifom yohlobo lwalo oluthile olukhusela iiseli ekuveliseni i-melanin.
Parsley. Ekubunjweni kwayo ngobuninzi bunee-oyile ezibalulekileyo, ezenza ukuba isikhumba sikhanyise.
Ikhukhamba kunye nemon iqulethe i-ascorbic acid kunye ne-acid acid. Ezi mveliso zingasetyenziswa zombini nangaphakathi.
Amafomu e-cosmetology yendabuko angasebenzisa ekhaya zonke iintlobo zokutshiza, i-tonics, ubisi, i-masks, i-creams, ezenziwe kwizityalo ze-cosmetics. Kunokwenzeka ukuba uye kwi-salon, apho baya kunika uluhlu oluthile lweendlela zokuzicoca ezinceda ukucoca ulusu. Namhlanje uye wathandwa ukuvelisa iimveliso zonyango, eziqulethe izixhobo zezityalo. Umgca wee-agent zangokugqithisileyo uquka ezi zinto zilandelayo:
ubisi ukususa izimonyo okanye i-gel yokuhlamba;
lotion okanye i tonic;
Ukufezekisa umphumo olungcono, ezi ziyobisi kufuneka zisetyenziswe kwiiveki ezi-5-8.
Ukuba uthetha malunga nama-creams ahlukeneyo anokukhuthaza ukusikwa kwesikhumba ebusweni kunokwenzeka ukuba usebenzise oku kulandelayo:
Cream nge mercury. Ukhilimu ophezulu, kodwa uyingozi kakhulu. Se benzisa kufuneka uqaphele. Kwaye kukulungele ukukhangela isikhumba sobubele ngaphambi kokuqala inkqubo. Azinconywa ngabafazi nabasetyhini abakhulelweyo ngexesha lokutya.
I-cream kunye neyeyevoy okanye i-lactic acid. Olu hlobo lwe-ukhilimu luvimbela umveliso we-melanin kwaye uphilisa isikhumba.
Utywala lwe-Salicylic (2%). Kunconywa ukuba kusetyenziswe ngokudibeneyo kunye neentlobo zeenqatha ezinamafutha. Inkqubo yesicelo - iiveki ezimbini. Kwiveki yesithathu, kuyimfuneko ukutshintsha utshwala kunye ne-kefir (iintsuku ezine), kwaye kwakhona ungasebenzisa utywala oludakayo.
I-kirimu ye-Whitening, iphekwe ekhaya
15 g ye-lanolin, 50 g yeoli yelitye, 1 tbsp. l. ikhukhamba
I-Lanolin ukuba ichithe, yongeza ioli yelitye kunye nekhukhamba etyumkileyo. Ngeyure, umxube kufuneka ubanjwe kwindawo yokuhlambela ngamanzi. Emva kokuxuba okulungileyo, umxube kunye nesibhobho. Iiyure ezingama-2 ngaphambi kokulala, lo bunzima kufuneka uhluthwe kwiindawo zokubala. Emva kwemizuzu emi-5, gxobhoza nge-napkin, ususe ama-remnants. I-Cream ukusebenzisa iveki e-1.
Sebenzisa naluphi ukhilimu omhlophe ngakumbi ekuseni, kunye nemizuzu embalwa ngaphambi kokuba uphume kwindawo yesikhumba esiluhlaza. Kulo xesha kulungile ukusebenzisa ityuni okanye ubisi obunzima / i-kefir.
Ii-aples ebusika - zokupheka kunye namalungiselelo kwiimbiza ezi-3-litre: i-compote, iizambane ezifihliweyo, i-sugar-free, i-lobules. Ukugcina ii-apula ebusika ekhaya
Shish kebab ekhaya
Ukubunjwa kweplastiki kubantwana ukususela komnyaka ukuya kubini
I-lavash ne-suluguni kunye ne-cilantro
I-microelements kunye namavithamini kunye nomxholo wazo kwimveliso